फाइनलमा लगातार ४ छक्का हान्ने ब्राथवेट अन्तिम ओभरबारे के भन्छन् ? - Enepalese.com
फाइनलमा लगातार ४ छक्का हान्ने ब्राथवेट अन्तिम ओभरबारे के भन्छन् ?
इनेप्लिज २०७२ चैत २३ गते १५:४० मा प्रकाशित
टी–२० विश्वकपको फाइनल खेलको अन्तिम ओभरमा लगातार ४ वटा छक्का हानेर इंग्ल्याण्डको हात परिसकेको उपाधि खोसेर वेस्ट इन्डिजलाई विश्व च्याम्पियन बनाएका कार्लोस ब्राथवेटले सो अन्तिम ओभरको बारेमा रोचक खुलासा गरेका छन् ।
उनले आफूहरुले अन्तिम ओभरअघि नै इंग्ल्याण्डले प्रस्तुत गरेको लक्ष्यसम्म पुग्ने योजना बनाएको तर त्यो सफल नभएको उनले बताए । ब्राथवेटले आफूले छक्का हान्ने कुनै योजना नबनाएको बरु जसरी हुन्छ स्यामुअललाई खेल्ने अवसर खोजेको बताए ।
‘स्यामुअल ८० रनमा खेलिरहेका थिए । उनले रन पछ्याउनमा टोलीको नेतृत्व गरिररहेका थिए । मलाई लाग्यो उनले नै बाउन्ड्री लगाउने छन्,’ उनले भने, ‘क्रिस जोर्डनले उत्कृष्ट बलिङ गरे । जसले स्यामुअलले रन नै बनाउन सकेनन् ।
त्यही भएर स्यामुअलको साटो मैले २० औं ओभरमा मैले सट लगाउनुपर्यो । किनभने त्यतिबेला प्रेसर निकै बढी सकेको थियो ।’
अन्तिम ओभरअघि स्यामुअलको सुझाव
अन्तिम ओभरअघि स्यामुअलले आफ्नो अघि आएर जसरी पनि एक रन लिन सुझाव दिएको बताए । उनले भने, ‘जे होस्, चाहे बलमा ब्याट लागोस् या नलागोस् तर रनको लागि कुद भनेर स्यामुअलले भनेका थिए ।’
ब्राथवेटले उनको निर्देशन अनुसार बेन स्टोकको पहिलो बलमा मज्जाले ब्याट घुमाएर हिर्काएर रनका लागि कुदे तर बल भने छक्का बनेर बाउन्ड्री पारी पुगिसकेको थियो । ‘जब छक्का लाग्यो, मलाई लाग्यो पक्कै पनि स्टोकले लाइन मिस गरे होलान्,’ उनले भने ।
‘दोस्रो बल पनि हिर्काउने बित्तिकै छक्का भयो । अब चाहीँ म हिरो बन्न लागेको भान भयो,’ उनले भने, ‘अब हामीलाई ४ बलमा ७ रनमा मात्र आवश्यक थियो । मैले फेरि ब्याट घुमाए, छक्का भयो । पत्यानुहोस्, त्यो मिस हिट थियो ।’ उनले चौंथो बलमा सबै खेलाडी नजिक आएको हुँदा एक रन लिन सम्भव नभएपछि फेरि जोडले हिर्काउने निधो गरेको बताए । त्यही विजयी रनले बेस्ट इन्डिजले इतिहास रच्दै दोस्रो पटक विश्वच्याम्पियन बन्न सफल रह्यो ।